Home सेलिब्रिटी अशोक दर्जीलाई ‘दमै’ भन्दै होच्याएपछि टंकले यसरि चित्त दुखाए ( भिडियो )
June 4, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, Leaveacomment
फेसबुक मार्फत अशोक दर्जीलाई एक व्यक्तिले ‘दमै ‘ भनेर स्टेटस राखेपछि अहिले सामाजिक संजालमा हङ्गामा मचिएको छ। टंक र अशोकको समर्थनमा फ्यानहरुले होच्याएको भन्दै आपत्ति जनाउदै कमेन्टहरु आएका छन्। दुर्गा पंगेनीले सामाजिक संजालमा लेखेको एक स्टेटसले टंक लाइ निकै मन दुखेको बताए। हिजो राति स्टेटस हेरे देखिने सुत्न नसकेको र औसधि खानु परेको टंकले बताए।
टंक बुढाथोकीले चित्त दुखाउदै आफ्नो फेसबुक मार्फत यस्तो लेखेका छन् : ‘ नमस्कार ।। रातको 12 बजे पनि यहा जल्ने हरुको मुटु पोल्दो रैछ निन्द्रा हराम हुदो रैछ ।। पढे लेखेको हजुर Durga Pangeni जि अहिले को समयमा पनि जातको कुरा गर्नु हुन्छ ?
बाकी कुरा भोली गर्ने छु अहिले अशोक सुतेका छ्न अब पढ्न सक्ने भएका छन ! ‘
केही दिन अघि मात्र चर्चित बाल गायक अशोक दर्जीको गित सिम्पल डिम्पलको सुटिङ्गको रिर्पोटको समाचारहरु बन्दा अशोकको एउटा फोटो भाइरल जस्तै भएको थियो । समाचार आउने क्रममा बाइकमा गलफ्रेन्ड बोकेर अशोक जस्ता शिर्षक आएको थियो र धेरै अनलाइनहरु बाट सोही शिर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
अशोकलाई टंकले पैसा कमाउन प्रयोग गरेको भन्दै स्टाटस लेखेका थिए। सोहि स्टेटस मा टंकलाइ कमिना पनि भनेका छन्। बिबादित बनेको यस स्टेटस लाइ टंकले स्क्रिनसर्ट गरेर आफ्नो फेसबुक मा पोस्ट गर्दै उत्तर पनि दिएका छन्। भिडियो अन्तर्वार्तामा टंकले आफुलाई निकै दुखित बनाएको बताउदै यस्तो सबै कुरा हरु अशोकले समेत बुझ्ने भैसकेको बताए। आफुलाई कानुनि प्रक्रियामा जान सल्लाह आएको भएपनि यस बारेमा के गर्ने भन्ने निर्णय भैनसकेको बताए। यसरि जात भातको कुरालाइ समाज बाट निर्मुल पर्न पर्ने मा जोड दिए।
राजेश पायल देखिए कालि केटि संग , भाउजु भन्दै मच्चियो तहल्का
नायिका सम्राज्ञीले मेकअप बिनाको तस्बिर सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्दा ........( तस्बिर सहित )
नेपालीहरुको गुनासो सुन्न सिधा कुरा जनताको टोलि अस्ट्रेलिया उड्यो ! अस्ट्रेलियाबाटै प्रसारण हुने
भोलि बुधबार इदको सार्वजनिक बिदा
महाभूकम्प आउँछ भन्दै अफवाह फैलाउने ‘ज्योतिष’ पक्राउ
‘गलबन्दी’ कि लजालु मोडल अन्जली अधिकारीको यस्तो हट अवतार ( फोटो फिचर )